Imibhalo kaPeo Persson ku Martech Zone |
Imibhalo nge Umuntu kaPeo
UPeo ngusomaqhinga wokumaketha edijithali onesizinda sokubonisana, kwezamabhizinisi. Ngaphambi kokusungula ngokubambisana iDanAds e2013, wayephethe izindima eziningi emkhakheni wezokuxhumana nabakwa-IT abanolwazi olucishe lube yishumi lokusebenza ngobuchwepheshe besikhangiso. UPeo wayebuye abe yingxenye yethimba elisungula iHybris Empire, inkampani yezokuxhumana yedijithali kanye nenkampani yokukhangisa.
IDanAds: Ubuchwepheshe Bokukhangisa Obuzenzela Abashicileli
NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2021 NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2021 Umuntu kaPeo
Ukukhangisa kohlelo (ukuzenzekelayo kokuthenga nokuthengisa ukukhangisa okuku-inthanethi) kube yisisekelo sabathengisi banamuhla iminyaka eminingi futhi kulula ukubona ukuthi kungani. Ikhono labathengi bemidiya lokusebenzisa isoftware ukuthenga ukukhangisa liguqule indawo yokukhangisa yedijithali, lisuse isidingo sezinqubo zendabuko ezinjengezicelo zeziphakamiso, amathenda, izingcaphuno, futhi, ikakhulukazi izingxoxo zabantu. Ukukhangisa kohlelo lwendabuko, noma ukukhangisa okuhleliwe kwensizakalo njengoba kwesinye isikhathi kubizwa,